Fikradaha lagu xirayo guriga | Ragga Stylish
SARS-CoV-2 waa qasabtay soo rogo xirid si looga fogaado kororka qalooca faafa. Kuwa ku nool guri ku yaal waddanka ama beer leh sidaas ma saameynayso. Laakiin dadka qaarkiis ee u baahan inay ku sii nagaadaan dabaqyo yar yar oo aan lahayn dabaqyo, balakoonno, iwm. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira waxyaabo badan oo aad ku sameyn kartid guriga si aad uga gudubto maalmahan sida ugu wanaagsan uguna macquulsan uguna caafimaad qab.
Haddii aad keligaa nooshahay ama haddii lagu weheliyo, waa inaad tixgelisaa talooyin taxane ah si taasi aysan u saameyn caafimaadkaaga maskaxda ama caafimaadkaaga jirka. Intaas waxaa sii dheer, waa inaad raadisaa ilaha jahwareerka si maalintaas dhaqso ugu dhaafto oo aad iska ilaaliso soo-gaadhista wararka xun ee noocan oo kale ah maalmahan. Taasi kaa caawin mayso gabi ahaanba, waa wax cagsi ah. Gaar ahaan nugul waa kuwa aadka u yar yar iyo waayeelka.
1 Karintaada adoo leh
3.1 Hawlaha jimicsiga ee lagu sameeyo guriga
3.1.3 Jaranjarooyinka kor iyo hoos
3.1.6 Fuula Buurta
4 La ciyaarida caruurta
Karintaada adoo leh
Waa wax aan la rumaysan karin in dadka xidhan inta badan ay doorteen inay qabtaan shaqooyin badan oo guri in ka hor intaanay dayacin ama ay dib u dhigaan caajisnimo ama waqti la’aan darteed. Intaas waxaa sii dheer, dadka waqtiga badan ku bixiya karinta ayaa aad u badan. Xaqiiqdii, sida ku xusan falanqaynta tirakoobka, iibinta wax soo saarka sida bur, sonkor iyo waxyaabaha kale ee aasaasiga ah ayaa kordhay maalmahan.
Caddaynta tani sidoo kale waa in dadku sameynayaan macmacaan badan iyo keega guryaha lagu sameeyo. Tan waxaa sidoo kale laga dheehan karaa saameynta ay ku yeelatay iibinta rootiyada warshadaha, taas oo si xiisa leh ay hoos ugu dhacday. Waxay leeyihiin shar ma jiro oo wanaaggu ku imaado mooyee. Waxayna umuuqataa in cudurkan faafa ay dadka ku kaliftay inay go aansadaan inay cunaan caafimad ayna ku badalaan cuntada la warshadeeyay cuntooyin badan oo guriga lagu sameeyo oo caafimaad badan leh.
Waa sidaas jikada waa shay mideeya reerka. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad baashaal sameyso oo aad sameyso waxqabad kaa mashquulin kara inta lagu jiro maalmahan xabsiyada. Intaas waxaa sii dheer, dadka waaweyn iyo carruurtuba way ka qaybqaadan karaan, illaa iyo inta taxaddarrada taxanaha ah ee nabadgelyada la ixtiraamayo si aysan shilal u dhicin. Iyo waxa ugu fiican oo dhan, marka qashinka la dhammeeyo, waad dhadhamin kartaa oo hubi kartaa natiijada. Xitaa caruur yar yar oo aan jeclayn cunnooyinka qaarkood ama khudradda, haddii ay yihiin kuwa iskaashanaya, way cuni doonaan. Dariiqo kor loogu qaado cuntada caafimaadka leh ...
Si aad u diyaariso cuntada ugu fiican maalmahaan, waxaad isticmaali kartaa buugaag badan oo cuntada lagu qoro oo ka jira internetka, ama buugaagta karinta ee aad ka heli karto. Tusaale wanaagsan haddii aad haysato mashiinka cuntada ee Thermomix waa Buugga Thermorecetas. Cinwaan ay ku raran yihiin cuntooyin caafimaad oo nooc walba leh iyo dhammaan qoyska. Cunnooyinka macaan iyo cusbada leh, ee ku habboon dhammaan moodooyinka rootada jikada Vorwerk iyo xitaa haddii aad ku xanuunsato nooc ka mid ah dulqaad la'aanta cuntada ama aad tahay khudradda ...
Hawlaha kale ee aad qaban karto maalmahan xadhiggu waa inay ku xidhaan dunida madadaalada. Taasi waxay ka dhacdaa buugaagta, illaa ciyaaraha fiidiyowga, iyada oo loo marayo qulqulka mawduucyada aad ka daawan karto dhammaan noocyada waxyaabaha ku jira.
Waxaas oo dhami maahan oo keliya hab lagu mashquuliyo iyo haka caajisin suurtagalnimada aad u baxdo. Sidoo kale waa kiniin yar oo caafimaadka maskaxda ah si aadan u waalaan ama aadan ugu dhicin niyad jab. Walaaca iyo niyadjabka (iyo cilladaha la xiriira sida dareenka, hurdo la'aanta, cabsida ka dilaacda ...) waa laba ka mid ah xanuunnada bulshada horumarsan ee hadda qarxaya. Gaar ahaan haddii aad kaliya u isticmaashid wararka xun warbaahinta.
Qaarkood fikradaha si aad si fiican uga gudubto xiritaanka ayaa ah:
Dhufto ee socodka: Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Quibi, Movistar +, Rakuten TV, Youtube, Play Video, Apple TV, iwm, ayaa waxaa ku soo kordhay dadka isticmaala xilligan. Markaa waxay sameyn karaan maratoonno ka mid ah filimada iyo taxanaha la jecel yahay. Qaar ka mid ah barnaamijyadu waxay xitaa bixiyaan dalabyo ama waqtiyo tijaabo ah oo lacag la'aan ah oo karantiil ah, sida ku dhacda Movistar + Lite.
VideogamesHaddii aad haysato qalab mobilo ah, PC, ama konsol, hab kale oo aad ugu raaxeysato si weyn waa inaad dhowr saacadood ku qaadataa ciyaaro cinwaannada aad ugu jeceshahay. Ciyaaraha fiidiyowga badan ayaa arkay hoos u dhac qiimo leh oo ah tilmaam ay sameeyeen kuwa horumariya si ay uga caawiyaan isticmaaleyaasha waqtiyadan. Cinwaannada lagu taliyey qaarkood waa:
F1 2019 Halyeeyga Halyeeyga PS4 / Xbox One: Haddii aad haysato suud Motorsport sababo la xiriira baajinta jadwalka, waxaad ciyaari kartaa qaar ka mid ah ciyaaraha dalwaddii ah.
FIFA 20 loogu talagalay PC / PS4 / Xbox One
GTA V: haddii aadan jecleyn cayaaraha oo aad rabto inaad ficil sameyso, kani waa mid ka mid ah kuwa fiidiyowga loogu iibiyo badan yahay sannadka 2020 iyo sababo ...
Xaaladda Sheeko Minecraft loogu talagalay PC / Xbox One / PS4: oo haddii aad rabto inaad baraarujiso dhinacaaga ugu hal-abuurka badan oo aad isku darto badbaadada iyo dhismaha, markaa kani waa ciyaartiina.
Ciyaaraha guddiga: waxay u egtahay in waqti badan oo gurigaaga ah iyo shaqada taleefanka aad xoogaa ku daashay eegidda shaashadda. Haddii aad rabto inaad indhahaaga siiso nasasho oo aad sameyso wax ka duwan, waxaad isticmaali kartaa ciyaaraha guddiga caadiga ah. Waxay kuu oggolaan doonaan inaad waqti la qaadato qoyska oo sidaan hore loo iloobay laxanka nolosha iyo tiknoolajiyada cusub. Talooyinka qaarkood waa:
Jenga: ciyaar gogo 'madadaalo ah oo fiidiyoow ah oo aad u baahan tahay inaad ka saarto baloogyada iyadoo munaaraddu aysan burburin. Ciyaar caan noqotay gaar ahaan taxanaha The Big Bang Theory.
Carcassonne- Ciyaar qosol leh oo qarniyadii dhexe leh oo leh magaca wadahadalada Faransiiska ee dhiirrigeliyey.
XisbigaHaddii aad rabto inaad baashaal iyo qosol gasho, ciyaartan guddigu waa waxaad raadineysay, oo leh tijaabooyin kala duwan oo caqabad ku noqon doona caqligaaga.
Buugaag / buugaag: Maalinta Buuggu waa soo dhowdahay, oo sidee uga wanaagsan oo loo dabbaaldegaa marka loo eego adoo siinaya buug ama akhristaha elektarooniga ah sida Amazon Kindle Marka waxaad kumanaan buug ku haysan kartaa hal aalad oo si raaxo leh ugu aqriso. Hadaad ii ogolaato talooyinka qaarkood:
Crypt-kii Ugu Dambeeyay / Kabtan riley: laba buug oo uu qoray Fernando Gamboa kuwaas oo noqday kuwa ugu horeeya iibka dalka Spain isla markaana kugu quusaya adduunyo hal-abuurro aan la qiyaasi karin.
SIDI: waxaa qoray Arturo Pérez Reverte waa sheeko kale oo lagugula taliyay inay kugu ridi doonto kabaha halgamaaga musaafuriska ah ee ku dhexjira saliibiyiinta.
Nasiibka nacasyada: iibiyaha kale ee ugu fiican ee kasbaday filimkan xiisaha leh ee reer Galician.
Waxyaabaha kale ee ay tahay inaadan iska indhatirin inta lagu jiro xabsiga ayaa ah jimicsi jir ahaaneed. Hadda ma aadi kartid qolka jimicsiga ama banaanka uma ordi kartid, waxaa si gaar ah muhiim u ah inaad qaab ahaan u ekaato. Gaar ahaan haddii aad nafsaddaada u hurtay inaad karinta macmacaanka ama cuntooyinka leh kalooriyo badan maalmahaan.
Sababtoo ah inaadan bixi karin micnaheedu maahan inaad jimicsi sameyn karin. Kuwa badan baa jira jimicsiga waxaad ku sameyn kartaa guriga Looma baahna dumbbells, miisaanka, ama mashiinnada jimicsiga. Si fudud adiga oo kaashanaya jirkaaga ama walxaha qof walba ku haysto guriga. Inta badan derin si aad ugu awoodo inaad ku sameyso dabaqa si raaxo leh.
Barnaamijyada waxqabadka ama astaamaha Caawiyayaal dalwaddii Inaad udhaqantid sidii tababarayaal shaqsiyadeed ayaa waliba ah xulashooyinka qaarkood inay kugu dhiirrigeliyaan oo ay hadafyo yeeshaan. Kaliya dhowr daqiiqadood maalintii ayaa kugu filnaan doonta, sidaa darteedna iska ilaali inaad ku dhacdo qaab nololeed deggan oo kaa dhigaya inaad xoogaa koror dheeraad ah hesho oo aad bilowdo inaad ogaato saameynta caafimaadkaaga.
Jirkaaga ayaa caqli leh waana inaad dhageysataa. Qaar astaamo ka digaya jimicsi la’aan Waxay yihiin:
Nidaamka difaaca jirka oo niyadjabsan- Mid ka mid ah digniinta ugu halista badan ee jimicsi la'aantu waa inaad si dhakhso leh u bukoodo. Taasna waqtiyadan waa wax khatar badan. Sameynta jimicsi joogto ah ayaa kaa caawin doonta inaad xoojiso nidaamkaaga difaaca.
Cilladaha maskaxda: Jimicsi la'aantu waxay kaloo kordhin kartaa heerka walaacaaga, walwalka, waxay kuu horseedi kartaa isbadal deg deg ah, ruux la'aan, iwm. Haddii aad taas ogaatid, waxaa laga yaabaa inaanay dhammaan khaladka ahayn in la xayiro ...
Daal: waxaad dareemi doontaa daal badan, inaad dhib kugu tahay inaad neefsato ama daal kugu dhaco markaad sameyso dadaal kasta ama dhaqdhaqaaq jireed.
Insomnio: Dhaqdhaqaaq la’aan ayaa sidoo kale horseedi karta hurdo la’aan ama hurdo la’aan.
Calool istaag: haddii aadan dhaqaajin xiidmahaaga si sax ah uma sameyn doono. Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad joogto ahaato oo aysan wax badan kugu qaali doonin inaad musqusha aado, jimicsiga jirku waa daawo wanaagsan.
Hawlaha jimicsiga ee lagu sameeyo guriga
Qaar ka mid ah layliyo wax ku ool ah oo aad ku sameyn karto guriga iyada oo aan loo baahnayn jimicsi waa:
Jaranjarooyinka kor iyo hoos
La ciyaarida caruurta
ka carruurtu waa mid kale oo ka mid ah dhibbanayaasha waaweyn cudurkan faafa, oo ay weheliyaan waayeelka. In kasta oo carruurtu u muuqdaan kuwo aan u nugulayn fayraska, haddana waxay u nugul yihiin tallaabooyinka xaddidan ee ay soo rogtay dawladda. Taasi waa sababta ay ugu oggolaan doonaan carruurta hadda ku go'doonsan guriga qaab koontarool ah, badiyaa iyaga oo aan si buuxda u fahmin sababta aysan banaanka ugu bixi karin marka dadka waaweyn ee guriga jooga ay u baxaan.
Marka hadda waa waqti fiican oo waqti lala qaato iyaga. Waqtigaas oo ah shaqo darteed, ama qaab nololeed aad u mashquul badan, uma huri kartid iyaga. Haddii aad la ciyaartid ama aad farshaxan ku samaysatid, waxay si fiican u dhaafi doonaan karantiilkan. Intaas waxaa sii dheer, waxaad ka hortageysaa inay waqti badan ku qaataan ku dhaji shaashadda. Waxyaabaha aan ugu fiicnayn sidoo kale ... Haddii ay leeyihiin casharro guri ama fasallo farshaxan ah, sidoo kale waad ka caawin kartaa taas si ay u dareemaan inay kuu dhow yihiin oo ay taageerayaan.
Xaqiiqdii way ka caajisaan daawashada waxyaabaha yaryar ee TV-ga, iyo waliba waxyaabaha ay ku ciyaaraan iyaga oo saacado badan la jooga. Waa wax iska caadi ah, maadaama ka hor hawshiisu ay kala duwanaan jirtay. Haddiise ay jirto wax ay jecel yihiin waa inay awoodaan inay abuuraan waxyaabo. Sidaa darteed, balooggan waxaad ku haysaa fikrado waaweyn inaad awoodo inay ku farsameeyaan farshaxan alaabta aad guriga ku haysato oo ay jeclaan doonaan… yaa og inaad adiga adigana?
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Fikradaha xayiraadda guriga